KosmoTime: Gadzira Mabasa Anochengetera Nguva Pane Karenda Yako | Martech Zone
KosmoTime: Gadzira Mabasa Anochengetera Nguva Pane Yako Karenda
Chitatu, November 18, 2020 Chitatu, November 18, 2020 Douglas Karr
Semubatsiri mubazi rinoshanda nemakambani emabhizimusi, mazuva angu haana kujeka uye kendendende yangu inyonganiso - kubhowa kubva pakutengesa, kuronga, kumira-kusimuka, kubatana, uye misangano yevadikani isingamire. Pakati pese kufona uku, ini ndinofanirwa kuita kuti basa riitwe iro randakazvipira nevatengi, futi!
Chinhu chimwe chandakaita ini pachekare zvakapusa yakavharirwa nguva pakarenda rangu kuti ndive nechokwadi chekuti ndinogona kuita kuti mabasa angu apedziswe uye nekuziviswa kune vedu vatengi. Kana bhuroka rangu rasvika, ndinotarisa padhia rangu rekutendeka repepa uye ndotanga kurova pasi mabasa akasarudzika.
KosmoTime Nguva Yekutonga
KosmoTime inguva yekushandisa app iri kubatsira vanamati kuti vawane basa nekuisa mabasa pakarenda ne otomatiki kukanganisa zvinovhara maficha. KosmoTime ndicho chinongedzo chiripo pakati pekuita kuti basa rako riitwe, kuenzanisa iro basa nekarenda yako, uye kuona kuti hapana zvinokanganisa iwe uchiri kuzviita.
Batch Yako Mabasa - mabasa anowanzo kuve madiki-matanho kune yakakura chirongwa. KosmoTime inoita kuti iwe ugone kuronga mabasa ako uye wozoronga nguva yekuona kuti chirongwa chinogona kupedzwa.
Bvisa Zvese Zvinokanganisa - KosmoTime inovhara pasi tabo rako uye inodzima yako Slack notices kana iwe watanga rako basa. Paunenge wapedza, KosmoTime inosarudza kuvhurazve iwo ese tabo uye ziviso
Wedzera Basa kubva kuChannel - KosmoTime inoita kuti iwe ubhukumise chero URL uye woichinja kuti ive Task mukubaya kamwe chete kubva Google Chrome. Iwe unogona kuzoigovera iyo kuSprint uye uzviite panguva yakakodzera, mukutarisa chaiko.
Chengetedza Karenda Yako - KosmoTime inosangana zvakananga neako Microsoft kana Google karenda. Wedzera basa kana bhuroka rebasa, rihudze mukarenda yako, uye unogona kuwedzera nguva yekuvhara nguva yakawanda sezvaunoda kuti basa rako riitwe.
Chinangwa cheKosmoTime ndechekugonesa vashandisi kuti vasvike pakukwanisa kwavo kuzere kwekugadzira, uye mukuita vachidzorera kudzora kwenguva yavo uye nemanzwiro avo erusununguko. s
Tags: kushambadzira kwekushambadziragooglekosmotimeMicrosoftbasa manejimendimutariri webasa
Global Ecommerce: otomatiki vs Muchina vs Vanhu Shanduro yeNzvimbo
Maitiro eBenchmark Yako Amazon Kushambadzira Akaunti